SERIE A: CHI VS ACM 1-3…Milan oo kaalinta 2-aad is keentay + Sawirro – Gool FM
SERIE A: CHI VS ACM 1-3…Milan oo kaalinta 2-aad is keentay + Sawirro
(Verona) 17 Okt 2016 – Kooxaha Chievo iyo AC Milan ayaa foolka isku diirey kulan loogu tartamayay kaalinta 2-aad ee horyaalka Talyaaniga maaddaama ay isku dhibco ahaayeen.
Laacibiinta Juraj Kucka iyo M’Baye Niang ayaana AC Milan labada gelin laba gool oo qurux badan u kala dhaliyay, ka hor inta aanu dhamaadkii uusan goolka 3-aad raacinin Carlos Bacca oo wax aan 7 daqiiqo ka badnayn ciyaaray, goolka madiga ah oo ahaa laad xor ah oo qurux badan waxaa ku fara yaraystay Valter Birsa oo Chievo u dheela.
Kulankan oo ay ciyaarayeen labada kooxood ee ay midina ugu da’ yar tahay horyaalka taasoo ah AC Milan, kooxina ugu da’wayn tahay ayaa waxaa booska maareeyaha khadka dhexe lagu aamineyy Manuel Locatelli oo 18-jir ah kaasoo bedeley Riccardo Montolivo oo miiska daawada kula biiray Andrea Bertolacci, Luca Antonelli, Mati Fernandez iyo Cristian Zapata oo horay uga maqnaa kooxda Vincenzo Montella.
Kooxda AC Milan ayaa haatan kaalinta 2-aad ku wehlisa AS Roma iyadoo todobaadka 9-aad ee soo aaddan kulan adag kula ballansan Juventus oo haatan 5 dhibcood hoggaanka uga haysa.
Kooxda Chievo oo aan 11 kulan gurigooda looga badinin, ayay tani u tahay markii ugu horreeysey tan iyo 2012 ee ay Milan gool ka badan uga dhaliso Bentegodi, waloow 23 kulan ay 2 jeer oo qura Milan ka badisay. AC Milan ayaa badisay 4 ka mid ah 5-tii kulan ee ugu dambeeyay.
during the Serie A match between AC ChievoVerona and AC Milan at Stadio Marc’Antonio Bentegodi on October 16, 2016 in Verona, Italy.
Flop-kii Man United Anderson oo la ganaaxay kaddib markii uu wajiga ka feeray isla markaana dhiig ka keenay…..
Banaadir S.C iyo Gantaalaha Afgooye oo galabta isku dhagan